Usoro 9 IT Ụmụ akwụkwọ kwesịrị ime mgbe ha nụsịrị akwụkwọ nyocha 12th - ITS
Usoro 9 IT Ndị Mmụta Kwesịrị Ime Mgbe Ha Nụsịrị Nyocha 2017 12th Board
Ọmụmụ ihe ọmụmụ & Nkwepụta mgbe nyochachara 12th
1. Okwu Mmalite Java
4. Ígwé ojii dị mkpa
5. Ezigbo Ọdịnihu
7. Nche +
9. Ezigbo Ngwakọta
CBSE XII Nsonaazụ Nsonaazụ, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ga-akpọte aka na nkwenye na ọ bụ oge dị elu ịhọrọ usoro. Ihe ọmụmụ IT na-enye ohere dị egwu ka a na-achọsi ha ike ma nwee ike ime ka ndị mmadụ na-achọsi ọrụ ike na ọgba aghara dijitalụ nke na-aga n'ihu. Ndị a bụ ụfọdụ ihe bara uru ụmụ akwụkwọ na-ahụ maka nchịkwa 12th nwere ike ikpebi.
Aha akwukwo: OJI OCP Java OJP Java SE 7
Usoro a na-enye nkuzi mmemme maka ụmụ akwụkwọ. Nke a bụ ihe dị egwu ịmepụta ntọala na mmemme Java ma mara ihe ndị dị ka encapsulation, abstraction, na ihe nketa.
Uru - Site na o kwere omume ịkwalite na Java, ị nwere ike ịghọ onye mmemme Java. Tụkwasị na nke a, emesia ị nwere ike ijuputa dịka oru ngo ma ọ bụ onye nduzi ihe omume na-arụ ọrụ ebe ozi elu na ala nke Java ga-enyere gị aka ịmepụta ndozi dị mma mgbe ị na-elekọta usoro.
Aha akwukwo: 10266A: C # Ọzụzụ dị mkpa
Usoro ọmụmụ a na-agụnye usoro nke usoro C #, mmejuputa iwu, na nchịkọta asụsụ. Ndị mmemme mmemme dị ala dị ala na-ewere ihe mmụta na aptitudes achọrọ ịmepụta C # ngwa. Usoro ahụ na-ekpuchikwa isiokwu ndị dị ka .NET Framework, jiri usoro ihe nkiri na C # mepụta ngwa .NET Framework.
Uru - Ntọala na C # ga-akwadebe gị ịghọ ndị na-arụ ọrụ na kọmputa na ndị na-emepụta desktọọpụ.
Aha akwukwo:CompTIA Linux +
Linux + N'ezie na-agba ume ka i merie atọ asambodo - CompTIA Linux +, LPIC-1, na Novell Certified Linux Administrator. Isiokwu ndị a na-eme ka ị nwee ike ịghọta ihe ndị Linux, Debian, na Ubuntu kwuru.
Uru - Ozugbo i mechara usoro a, ị ga-enwe ike ilekọta ngwaike, mezie ohere dịpụrụ adịpụ, rụọ ọrụ, mepụta ndekọ ndekọ ma mee ihe ndị ọzọ metụtara ya na ịmụta Linux. Ị ga - aghọ onye na - egbu egbu na - enweghị ike ịnweta ogbugba n'ọgba aghara a nke azụmahịa software.
Aha akwukwo: CompTIA ígwé ojii dị mkpa
Ụmụ akwụkwọ nke iri na abụọ Nsonaazụ klas nwere ike ime nke a nke ga-eme ka ha mara echiche nke ígwé ojii.
Uru - Dị ka ụmụ akwụkwọ na-eburu nchịkọta elu na ala nke usoro maka usoro nlekọta ojii. Ha ga-anakọta ozi nchịkwa banyere ọrụ nke ọrụ igwe ojii site na nkà na ụzụ na nke azụmahịa, bụ nke dị ugbu a bụ ihe dị mkpa maka ọnọdụ kwesịrị ekwesị na ngalaba IT na ndị na-abụghị IT.
N'ezie name: Ezigbo Ebube na Mwepu Otu, Google Cardboard, na Oculus Rift
Usoro ahụ na-enye ọzụzụ aka na Unity3D engine iji mepụta ọnọdụ dị mma maka Oculus Rift na Google Cardboard.
Uru - Ị ga-ewulite otu ụlọ ọrụ siri ike banyere nkà na ụzụ nke eziokwu dị omimi na ngwa ọgbara ọhụrụ ya. Ihe kachasị mma maka ndị na-eme egwuregwu egwuregwu, ihe ọmụmụ a bụ ihe kachasị mma n'etiti ụmụ akwụkwọ.
Aha akwukwo: Server CompTia +
Usoro a na-ekpuchi isiokwu dịka ngwanrọ, ngwaike, nchekwa, mgbake ọdachi, omume kachasị mma na ọnọdụ IT na nchọpụta nsogbu. N'ime usoro a, ị nwere ike nyochaa usoro nchekwa usoro ihe nkesa tinyere nsogbu mgbake ọdachi.
Uru - Na na mgbakwunye na nzube nke usoro a, ọ bụ onye na-ere ahịa n'enweghị ihe ọ bụla na-enweta ihe omuma banyere sava weebụ na nkà na ụzụ. Ịga n'ihu, ị nwere ike ịghọ onye na-enyocha IT dị ukwuu n'ịwụnye, na-echekwa ma na-edozi mpaghara netwọk mpaghara.
Aha akwukwo: CompTIA Security + Certification Training
Usoro IT / Kọmputa a nke iri na abụọ na-enye gị ohere ịme ihe mmụta nchekwa data na ezigbo netwọk. Ị ga-ewulite acumen siri ike na nchedo nchedo IT dịka nchịkwa nchịkwa, mwepụ ihe ize ndụ na nchịkwa ihe ize ndụ, cryptography, ihe nchebe, nchịkwa ịnweta ntanetị na ọtụtụ ndị ọzọ.
Uru - Gbalịa ịghọ ndị ọkachamara nchebe, ndị nlekọta nche ma ọ bụ ndị injinia nche. Ka mpụ nke cyber na-ebuli elu, ọrụ na cyber security nwere ike ịhọrọ nhọrọ nkwụghachi.
Aha akwukwo: CompTIA N +
Usoro ahụ na-enye nhazi ọzụzụ dị ala n'ịwụnye, ịhazi, ịdebe, nlekọta na nhazi nsogbu ngwaọrụ.
Uru - Ị ga-enwe ike ịmata ọdịiche dị iche iche nke ọgbụgba nke netwọk, ngwongwo LAN na WAN, nsogbu na nchekwa netwọk, wdg. Ọ dịghị ụlọ ọrụ taa nwere ike ịrụ ọrụ n'enweghị onye nlekota netwọk, na-agbakwụnye na ihe a na-ewu ewu na usoro a na nguzozi nke ndị ọkachamara. .
Aha akwukwo: Ezigbo Ngwakọta (AR na VR) Site na Ịdị n'otu 3D na Microsoft HoloLens
Ime ihe ọmụmụ a na - enye gị ohere iji jikọta Ezigbo Nzuzo na Ezigbo Ọdịnihu site na HoloLens ma chee echiche banyere ọrụ mgbagwoju anya nke ụwa nke ọma. Ọ na-ewebata gị na usoro Mgbapụ na ụzọ kacha mma iji soro kọmputa.
Uru - Ka ị na-amụta ma na-eche echiche na ijide esemokwu na ntinye ese onyinyo, gbanwee obi ụtọ nke ịmara na ilekọta eziokwu dị omimi na gbasaa eziokwu ma gbanwee ya dị ka ọrụ na-aga nke ọma.
N'okpuchi ahụ, bụrụ na ọ nwere ike ịbụ na ị nyochaa ule iri na abụọ nke ule ọkọlọtọ gị, ịnwere ike ịnọgide na-enwe obi ụtọ na ịchọta na ọ dịghị ụkọ nhọrọ ị ga-arụ mgbe ihe nyocha nke iri na abụọ gasịrị. N'ihe gbasara ọdịmma na ihe mgbaru ọsọ, ụmụ akwụkwọ nwere ike ịhọrọ nke ọ bụla n'ime ihe ndị e dere n'elu iji wuo ntọala zuru oke nke ozi na acumen ma kwenye na ọrụ ga-eme nke ọma n'ọdịnihu.